搜索 Abhidhamma 的结果：
abhidhamma：m. [abhi-dhamma，Sk. abhidharma] 阿毘達磨，阿毘曇，論，對法，勝法 [三藏之ー].
abhidhamma：m. [abhi-dhamma，Sk. abhidharma] 阿毘達磨，阿毘曇，論，対法，勝法 [三藏の一].
abhidhamma：m. [abhi-dhamma，Sk. abhidharma] 阿毘達磨，阿毘曇，論，対法，勝法 [三藏の一].-kathā阿毘達磨说.-pariyāya论の教说.-piṭaka论藏，对法藏.-pakaraṇa论书.-bhājaniya对法分别，论的分别.-mātikā论の论母，论の要母
Abhidhamma，【阳】《阿毗达摩》 论藏。 ~mika，【形】 论藏师。（p33）
abhidhamma：[m.] the analytic doctrine of the Buddhist Canon.
Abhidhamma，[abhi + dhamma] the “special Dhamma，” i. e.，1. theory of the doctrine，the doctrine classified，the doctrine pure and simple （without any admixture of literary grace or of personalities，or of anecdotes，or of arguments ad personam），Vin.I，64，68； IV，144； IV，344. Coupled with abhivinaya，D.III，267； M.I，272. -- 2. （only in the Chronicles and Commentaries） name of the Third Piṭaka，the third group of the canonical books. Dpvs.V，37； PvA.140. See the detailed discussion at DA.I，15，18 sq. [As the word abhidhamma standing alone is not found in Sn.or S or A，and only once or twice in the Dialogues，it probably came into use only towards the end of the period in which the4great Nikāyas grew up.]
--kathā discourse on philosophical or psychological matters，M.I，214，218； A.III，106，392. See dhammakathā. （Page 65）
Abhidhamma：A tīkā on the Abhidhammatthasangaha by Sumangala，pupil of Sāriputta （Navavimalabuddhi） （Gv. p. 62； Svd.1227）.
It is the most famous of the exegetical works on the Abhidhammatthasangaha. Compendium of Philosophy，Preface ix.
ABHIDHAMMA：[m] luận của Phật giáo --mika [a] người giảng dạy tạng luận
အဘိဓမ္မာ၊ အဘိဓမ္မာဒေသနာ၊ အဘိဓမ္မာပရိယတ်တရား။ အဘိဓမ္မာ-တန္တိ-ပါဠိ-ပိဋက။ （၁） လွန်ကဲ-ကြီးမား-ကျယ်ဝန်း-ထူးခြား-ဆန်းကြယ်-သော-ပရိသတ်တရား-ပါဠိ-ပိဋက၊ အဘိဓမ္မာ-တရား-ပါဠိ-ပိဋက။ （သုတ္တန်၌ ဥဒ္ဒေသ，နိဒ္ဒေသမျှသော နည်းတစိတ် တဒေသ၏ အစွမ်းအားဖြင့်သာလျှင် ဝေဖန်ဟောကြားအပ်သည်၊ အဘိဓမ္မာ၌မူ သုတ္တန္တဘာဇနိယ，အဘိဓမ္မဘာဇနိယ，ပဉှာပုစ္ဆာက နည်းတို့၏ အစွမ်းအားဖြင့် အကြွင်းမဲ့ ဝေဖန်ဟောကြားအပ်သည်）။ （၂） （က） ပွါးခြင်း，ဖြန့်ခြင်းရှိသော （ခ） မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာရှိသော （ဂ） ပူဇော်အပ်，ပူဇော်ထိုက်သော （ဃ） ပိုင်းခြားအပ်，ရောယှက်ခြင်းကင်းသော （င） လွန်，မြတ်သော တရားတို့ကို ဟောရာ-တန္တိ-ပါဠိ-ပိဋက။ （၃） နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟူသော အဘိဓမ္မာ။ （၄） မဂ်，ဖိုလ်ဟူသော အဘိဓမ္မာ၊ နိဗ္ဗာန်အဝင်ဝ၊ နိဗ္ဗာန်မုခ်ဦး။ （၅） ပညတ်မှ သီးခြားထုတ်အပ်သော ပရမတ္ထအဖြစ်အားဖြင့် ထူးမြတ်သော-သဘော-တရား-ကျမ်းဂန်-ပါဠိ-ပိဋက။ （၆） ဗောဓိပက္ခိယတရား သုံးဆယ့်ခုနစ်ပါးဟူသော အဘိဓမ္မာ။ （၇） စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ，အပ္ပမညာဝိဘင်းစသော ထိုထိုအဘိဓမ္မာ ဒေသနာအပိုင်းကဏ္ဍ။
ထူးမြတ်လွန်ကဲသော တရား။ အလွန်မြတ်သော တရား။ ပရမတ္ထတရား။
与 Abhidhamma 相似的巴利词：